काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिन म्याद लम्बिएको छ। आज असार २० गतेबाट जारी गरिएको ‘ज्योति विकास बैंक बन्ड–२०८७’ नामक ऋणपत्रको निष्कासन छिटोमा असार २३ गते र ढिलोमा साउन ३ गते बैंकिङ बन्द हुने भएको थियो। तर मागबमोजिम आवेदन नपरेकै कारण यो ऋणपत्रमा अब ढिलोमा साउन ३ गतेसम्म आवेदन दिन...
लक्ष्मी बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्र असार २० बाट निष्कासन हुने, ब्याज कति ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आउँदो असार २८ गतेबाट निष्कासन हुने भएको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘८.५% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्रको कुल इकाइमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ८ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ।&n...
ज्योति विकास बैंकको रु. १.५ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन खुला, वार्षिक ९% ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज असार २० गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल १५ लाख इकाइ भएको ‘ज्योति विकास बैंक बन्ड–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। यो ऋणपत्रको कुल इकाइमध्ये ९ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ६ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको...
एनआईसी एशिया बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र आवेदन दिने आज असार २० गते अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले गत असार ६ गतेबाट १० वर्षे अवधिको ‘एनआईसी एशिया ऋणपत्र–२०८८’ नामक ऋणपत्रको निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आ बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको...
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारी आन्दोलित
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै एनआईसी एशिया बैंक कर्मचारी संघले आज देशैभरि एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका...
लक्ष्मी र माछापुच्छ्रे बैंकले पाए ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति, कति छ ब्याजदर ?
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लक्ष्मी बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले लक्ष्मी बैंकलाई २ अर्ब रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे बैंकलाई ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो। धितोपत्र बोर्डको अनुमतिसँगै अब लक्ष्मी बैंकले ‘लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर’ र �...
ज्योति विकास बैंकको रु. १.५ अर्बको ऋणपत्र असार २० बाट निष्कासन हुने, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आउँदो असार २० गतेबाट निष्कासन हुने भएको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल १५ लाख इकाइ भएको ‘ज्योति विकास बैंक बन्ड–२०८७’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्रको कुल इकाइमध्ये ९ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ६ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन...
एनआईसी एशिया बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बियो
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र आवेदन दिन म्याद लम्बिएको छ। गत असार ६ गतेबाट बिक्री खुला गरिएको १० वर्षे अवधिको ‘एनआईसी एशिया ऋणपत्र–२०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन छिटोमा असार ९ र ढिलोमा असार २० गते बन्द हुने भनिएको थियो। असार ९ गतेसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेका कारण यो ऋणपत्रमा अब असार २० गतेसम्म आवेदन दिन...
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकको रु. १ अर्बको ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ। नेप्से र कामना सेवा विकास बैंकबीच ‘९% कामना सेवा बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०८७’ नामक ऋणपत्र सूचीकरण सम्झौता भएको हो। योसँगै बैंकको १ हजार अंकित दरका कुल १० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। यो बैंकले गत माघ २२ गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म यो...
मुक्तिनाथ विकास बैंकले पायो रु. १.२५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति, ब्याज कति ?
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार मुक्तिनाथलाई ‘मुक्तिनाथ विकास बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बोर्डको अनुमतिसँगै अब मुक्तिनाथले १ हजार अंकित दरका कुल १२ लाख ५० हजार इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन ग...
एनआईसी एशिया बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रका इकाइहरु आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र आज (असार ६ गते) बाट बिक्री गरिएको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘एनआईसी एशिया ऋणपत्र–२०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। यो ऋणपत्रका १ हजार अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ निष्कासन गरिएको छ। कुल निष्कासित इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ...
आजबाट सांग्रिला बैंकको रु. ७५ करोड ऋणपत्रमा आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको १० वर्षे अवधिको ऋणपत्रमा आज (असार ६ गते) देखि आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले रु. ७५ करोड रुपैयाँ ऋणपुँजी रकमबराबरको ‘सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिबेन्चर २०८७’ नामक ऋणपत्रको निष्कासन गरेको हो। यो ऋणपत्रमा छिटोमा असार ९ गतेसम्म र ढिलोमा असार २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले...
एनआईसी एसिया बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र असार ६ बाट निष्कासन हुने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र आउँदो असार ६ बाट निष्कासन हुने भएको छ। बैंकले १० वर्षे अवधिको ‘एनआईसी एशिया ऋणपत्र–२०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। यो ऋणपत्रका १ हजार अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ निष्कासन गरिनेछ। कुल निष्कासन गरिने इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ...
नबिल र एनआईसी एसिया बैंकले पाए ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बोर्डले नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकलाई ३/३ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो। बोर्डको अनुमतिसँगै अब नबिल बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंक दलका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘नबिल डिबेन्चर २०८५’ निष्कासन गर्नेछ। बैंकले कुल...
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकको ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (जेठ २६ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। बैंकले गत जेठ ११ गतेबाट रु. १ हजार अंकित दरका कुल ४० लाख इकाइ भएको ‘प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७’ निष्कासन गरेको छ। कुल इकाइमध्ये २४ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १६ लाख इकाइको सार्वजनिक निष्कासन गरिएको छ। सार्वजनिक निष्कासन गरिएका...